Waa maxay duufaannada cagaaran? | Saadaasha Shabakadda
Waxaan aad u nasiib badanahay inaan ku noolaano meeraha ay ku yaalliin astaamaha saadaasha hawada, sida duufaanta. Markii ay weheliyaan qalab koronto, waa kuwo cajiib ah, gaar ahaan haddii ay dhacaan habeenkii. Laakiin, Ma maqashay duufaanno cagaaran?
Maya, iyagu maahan quraafaad, in kastoo ay run tahay inay si fiican noqon karaan. Aad ayey u qurux badan yihiin, in kastoo ay khatar yihiin. Noo sheeg sababta.
1 Waa maxay duufaannada cagaaran sidee bayse u samaysan yihiin?
2 Laakiin runti ma cagaarbaa?
3 Maxay khatar u yihiin?
Waa maxay duufaannada cagaaran sidee bayse u samaysan yihiin?
Waa a ifafaalaha caadiga ah ee xilliga gu'ga iyo xagaaga oo lagu garto midabka cagaarka iyo huruudda ah ee ay ku soo gaadho heerkiisa ugu sarreeya. Daruuraha soo saara waxay leeyihiin muuqaal u eg suufka oo waxay ku yaalliin meel sare. Horumarkeedu waa mid aad u dhakhso badan, aad iyo aad u badan si aan isla markiiba u ogaanno urta caadiga ah ee roobka.
Ugu dambeyntiina, kororka dabaysha dabaysha ayaa noo sheegi doonta in duufaan cagaaran ay samaynayso. Taasi waa marka, nabadgelyadeena, waa inaan ilaalinaa nafteena.
Laakiin runti ma cagaarbaa?
Marka qalabka korontada ee la socda duufaanta uu aad u awood badan yahay, wuu “dhalaalin karaa” daruuraha way dhalaali karaan ama cagaari karaan. Tan waxaa loo sharaxay maxaa yeelay iftiinka waxaa lagu shaandheeyaa maaddooyinka loo yaqaan "nitrogen". Natiijo ahaan, qaar ka mid ah duufaannada ugu layaabka badan ayaa dhaca.
Maxay khatar u yihiin?
Duufaannada cagaaran badanaa waxay la xiriiraan dhacdooyinka cimilada daran. Dalka Mareykanka, waddanka duufaannada, aad bay ugu badan yihiin. Marka xaalad kuleyl daran ay dhacdo oo leh hawo diiran oo jeebka hawo qabow yimaado, duufaanno ayaa la soo saaraa kuwaas oo noqon kara dhacdooyinka aan soo sheegnay ama duufaannada.
Inkasta oo tani aysan ahayn dhammaantood. Iftiinka qoraxda ayaa go'aamiya midabka daruuraha. Haddii duufaanku bilaabo inuu sameysto ama ka guuro makhribkii, iftiinka qorraxdu wuu baabi'in doonaa midabada buluuga ah, maadaama markay ka tarjumeyso kristantiyada barafka ee daruuraha ay soo bixi doonaan midabka cagaaran.
Miyaad aragtay duufaanno cagaaran?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay duufaannada cagaaran?